စက် blasting ချိတ်အမျိုးအစားရိုက်ချက် - တရုတ် Qingdao Antai အကြီးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ
Qingdao ANTAI ချိတ် (တိုးတက်မှုနှုန်းကြိုးကွင်း) စက် blasting ရိုက်ချက်ကိုရိုက် အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည် ထိုကဲ့သို့သောလူမီနီယမ်သေ-သတ္တုများပုံသွန်း, မဂ္ဂနီစီယမ် Cast, အသေးစားသံမဏိသင်္ခါရ, အဖြစ်သေးစက်တွေ, ဘီးဝန်း / ဘီး, ဂီယာနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကုသမှု။ Medium/Large machines, such as, forges, foundries, steel structures, gears, heat treatments, electric transformers etc.
Qingdao ANTAI ချိတ် (တိုးတက်မှုနှုန်းကြိုးကွင်း) စက် blasting ရိုက်ချက်ကိုရိုက် လူမီနီယမ်သေ-သတ္တုများပုံသွန်း, မဂ္ဂနီစီယမ် Cast, အသေးစားသံမဏိသင်္ခါရ, ဘီးဝန်း / ဘီး, ဂီယာနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကုသ: အဓိကအားသေးစက်တွေအသုံးပြုသည်။ အလတ်စား / အကြီးစားစက်တွေ: Forge, foundries, သံမဏိအဆောက်အဦများ, ဂီယာ, အပူကုသမှု, လျှပ်စစ်ထရန်စဖော်မာစသည်တို့ကို
Qingdao ANTAI ချိတ် (တိုးတက်မှုနှုန်းကြိုးကွင်း) စက် blasting ရိုက်ချက်ကိုရိုက်ထည့် ထားတဲ့ overhead ပေါ်ကိုထံမှဆွဲထားအစိတ်အပိုင်းများကိုရှင်းလင်းဖို့ဒီဇိုင်းနှင့် Cast သို့မဟုတ်လိမ့်မရနိုငျသောကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ကျနော်တို့စီးဆင်းမှု-မှတဆင့် Y ကို-လမ်းကြောင်း, စဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ် In-line ကိုပေါက်ကွဲမှုဒီဇိုင်းများအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းကိုဆက်ကပ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းအချို့အားသာချက်များပါဝင်သည်: အစိတ်အပိုင်းများကိုမထိခိုက်စေဘဲလိုအပ်နိမ့်ခေါင်းကိုအခန်းထဲမှာနိမ့်ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, ပြည့်စုံပေါက်ကွဲမှုလွှမ်းခြုံ။
Qingdao ANTAI ချိတ် (တိုးတက်မှုနှုန်းကြိုးကွင်း) စက် blasting ရိုက်ချက်ကိုရိုက်ထည့် အလုပ်များစွာကိုအမျိုးအစားများများအတွက်သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတူတပ်ဆင်ဖြစ်ကြသည်။ စက်၏အကွာအဝေးကအရမ်းကျယ်ပြန့်သည်, ဒါကြောင့်မည်သည့်လိုအပ်ချက်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးစက်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းဆောင်တာမူအရအလုပ်-အပိုင်းပိုင်း (singly သို့မဟုတ်စုပေါင်း) ဆွဲထား၏တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေါက်ကွဲမှုအခန်းထဲက၏ဘက်မှာနေရာယူထားဘီးမှအပွန်းစားအရေးယူမှုမှအလုပ်အပိုင်းပိုင်းအပေါငျးတို့သမျက်နှာပြင်ဖော်ထုတ်စက်အတွင်းရှိချိတ်ပြေးနှင့် Rotate ။
ရိုက်ချက်ပေါက်ကွဲမှုအခန်းထဲက၏အရွယ်အစားအပြင်အဲဒီစက်တွေရဲ့ function ကိုချိတ်များတင်ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameter :
သန့်ရှင်းအလုပ်အပိုင်းအစ၏ Size ကို
kg / မိနစ်
M က 3/ ဇ
စက် blasting Hook အမျိုးအစားရိုက်ချက်၏ 3D ပုံဆွဲ
blasting အခန်းထဲက ပူဇုန် ကိုအသုံးပြုသည် 10မီလီမီတာအထူ ပူရှင်းပြီ သံမဏိပန်းကန် Mn13 တန်း ,ကိုအခြားဇုန်အကာအကွယ်ကှနျ့အသုံးပြုမှု 8 မီလီမီတာအထူတန်း 65Mn သံမဏိပန်းကန်။ Casting အခွံမာသီးပုကှနျ့ fixed ။
စက် blasting ရိုက်ချက်၏အပိုပစ္စည်း
ကျနော်တို့ရှည်လျားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်စပ်ပစ္စည်းစက်ရုံ, စျေးပေါစျေးနှုန်းမြန်ဆန်ပေးပို့အချိန်, အရည်အသွေးကောင်းရှိသည်။
စက် blasting ချိတ်အမျိုးအစားရိုက်ချက်များ၏သန့်ရှင်းရေးထိရောက်မှု
တိုင်းသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများစက် blasting ချိတ်အမျိုးအစားရိုက်ချက်အားဖြင့်သန့်ရှင်းရေးနိုင်ပါတယ်
ထိုသို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုအတုလုပ်တဲ့, အစိတ်အပိုင်းများကို ချ. , bogie, ဘီးဝန်း, ဘီးစသည်တို့ကြောင့်
စက် blasting ချိတ်အမျိုးအစားရိုက်ချက်၏ဖြန့်ဝေ
စက် blasting ချိတ်အမျိုးအစားရိုက်ချက်၏ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံစီမံကိန်းများ
ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောရုရှား, အဖြစ် 30 ကျော်နိုင်ငံ, အင်ဒိုနီးရှား, သြစတြေးလျ, အိန္ဒိယစသည်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုက်ချက်ပေါက်ကွဲမှုစက်တင်ပို့ခဲ့ကြ
စက်ကသင်၏ workpiece ဘို့မသင့်တော်ပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါအချက်အလက်တွေကိုပြောပြကျေးဇူးပြုပြီး:
ယခင်: စက် blasting သံမဏိပိုက်ပြင် & အတွင်းမြို့ရိုးကိုရိုက်ချက်
နောက်တစ်ခု: spinner hanger shot blasting machine for forging casting parts
စက် blasting 326 Shot
စက် blasting အလိုအလျောက်ပြား Shot
စက် blasting အလိုအလျောက်သံမဏိပြား Shot
စက် blasting ခါးပတ်အမျိုးအစား Shot
တိုက်ကြီး Feed ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအမျိုးအစား mesh ခါးပတ်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများသည်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက် Shot
crawler ပေါက်ကွဲမှုစက် Shot
ပန်းကန် Shot ပေါက်ကွဲမှုပစ္စည်း
ပန်းကန် Shot blasting စက်စျေး
Qxy2500 ပေါက်ကွဲမှုစက် Shot
Sheet များ / ဟင်းပွဲများအတွက်စက် blasting အမျိုးအစား Shot မှတဆင့်ကြိတ်စက်ပေါ်ကို Pass ကို
Rolling စည်ပေါက်ကွဲမှုစက် Shot
ရော်ဘာခါးပတ်နှင့်အတူ Shot ပေါက်ကွဲမှုစက်
သေ Cast ကိုအစိတ်အပိုင်းများသည်စက် blasting shot
သံမဏိပြားများအတွက်စက် blasting shot
Blastin Shot သံမဏိပြား
blasting သံမဏိပြား Shot ပြီးတော့ပန်းချီလိုင်း
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ပစ္စည်း Shot သံမဏိပြား
စက်စက် blasting သံမဏိပြား Shot
ပန်းချီစက် blasting သံမဏိပြား Shot
ရော်ဘာခါးပတ်ပေါက်ကွဲမှုစက် Shot ဖရိုဖရဲ
Tumling သံမဏိခါးပတ်ပေါက်ကွဲမှုစက် Shot